Vaovao - Inona avy ireo olana tokony hojerena rehefa mandeha ny tsipika famolavolana azy?
1. Fisafidianana ny milina lehibe sy mpanampy amin'ny tsipika famokarana orinasam-pamolavola sy ny fametrahana ny tsipika famokarana. Karazana fitaovana iray izay misy fiantraikany betsaka amin'ny famolavolana modely, toy ny fasika tsotra tanimanga, fasika sodium silicate ary fasika resin; fomba fikarohana modely; sokajy vokatra vy, toy ny vy vy sy vy vy; Casting habe sy ny takiana ho an'ny hihena rafitra rafitra; fanariana kalitao famokarana sy ny marina dia mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny lafin-javatra toy ny takiana.
2. Ny endrika, famaritana ary ny fahombiazan'ny milina famolavolana no antony manaparitaka ny filan'ny tsipika famokarana. Ohatra, na hampiasa milina famolavolana tsotra na milina famolavolana tsindry static, na milina tokana na tsipika fivorian'ny vondrona, famokarana, mekanisation ary automation sns., Izay mamaritra mivantana ny safidin'ny milina mpanampy sy ny rafitry ny ny tsipika famokarana.
3. Ny fomba fiasa sy ny fitantanana ny tsipika famokarana dia hisy fiantraikany amin'ny endrika famolavolana ny milina mpanampy sy ny fomba fianarana ny layout ny tsipika famokarana, ohatra, mitohy na miserana.
4. Ny fifehezana sy ny fomba fitantanana ny tsipika famokarana sy ny fitaovana fandefasana famantarana mifandraika amin'izany dia hisy fiantraikany amin'ny firafitry ny fikambanana eo an-toerana ny milina mpanampy tsipika sy ny conveyor casting ary ny endrika famolavolana tariby amin'ny tsipika famokarana.
5. Ny toetoetran'ny ozinina sy ny fepetra takiana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana dia misy fiatraikany amin'ny fametrahana ny milina lehibe sy fanampiny. Ny fanavaozana ny atrikasa taloha dia hisy ireo fameperana sy fepetra takiana amin'ny fametrahana ny tsipika famokarana ny orinasan-dôlam-modely. Indraindray ny fepetra takiana amin'ny fisorohana vovoka sy ny fihenan'ny tabataban'ny tontolo iainana ao amin'ny atrikasanay dia hisy fiantraikany amin'ny safidin'ny milina lehibe sy mpanampy ihany koa. Ohatra, mba hifehezana hentitra ny tabataba, ny tsipika famokarana dia tsy afaka mampiasa ny vibrant vibrant, fa ny drum shaker.
Sandbox, Masinina bobongolo, Famolavolana koveta fanariana, Masinina fanodinana semi-mandeha ho azy, Famolavolana tavoahangy, Milina Punch Out,